Mairelay: Ngwá Ọrụ iji mepụta mkpọsa Akwụkwọ Akụkọ | Akụkọ akụrụngwa
Nwere ike ịnwe ụlọ ọrụ nke gị ma ọ bụ rụọ ọrụ na ngalaba azụmaahịa ma ọ bụ azụmaahịa n'otu. Veryzọ a na-ahụkarị nke jikọrọ ndị ahịa bụ malite mkpọsa email. Ha nwere ike ịbụ mkpọsa, izipu akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ijikwa ndepụta ndị ị debanyere aha. Maka ụdị ọrụ a ịchọrọ ngwa ọrụ ruru ọrụ ahụ, yabụ Mailrelay bụ nhọrọ nwere ike ịmasị gị.
Mailrelay bụ ngwa ọrụ anyị ga-eji nwee ike jikwaa mgbasa ozi ahịa email anyị. Ọ na-enye ohere ịmepụta akwụkwọ akụkọ, na-ejikwa ọnụ ọgụgụ nke mkpọsa ahụ na ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ jikwaa ndepụta ndị ndebanye aha anyị. A zuru ezu na-akpali nnọọ mmasị na ngwá ọrụ.
Ọzọkwa, ugbu a, ha hapụ ụdị ọhụụ nke ngwa ọrụ a. Emegharịrị ya ka anyị nwee ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma yana ọ nwekwara ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ. Ya mere, egosiri ya dika nhọrọ zuru oke n'echiche a, nke anyị ga-agwa gị ihe niile n'okpuru.
1 Mailrelay wepụtara nsụgharị ọhụrụ
2 Niile na atụmatụ na otu free akaụntụ
Mailrelay wepụtara nsụgharị ọhụrụ
Companylọ ọrụ ahụ emeela mkpebi iji melite ngwá ọrụ ya, yana mgbanwe dị mkpa. E melitela nhazi ndebanye aha kpam kpam, maka otu nke dị mfe iji, na-ahụ anya ma na-enye ohere ịme ụfọdụ ọrụ n'ụzọ dị mfe. Akụkụ dị mkpa n'ime ụlọ ọrụ.
Na imewe, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ ewebatala ọhụụ ọhụrụ na nchịkọta nhọrọ kachasị elu, ebe anyị nwekwara ike ịhụ nchịkọta nke mkpọsa kachasị ọhụrụ, nke mere na ọ ga-ekwe omume ịchịkwa ha ugbua na isi ihuenyo. E mepụtala ngwa ọrụ ahụ wee meziwanye ya ọzọ, yabụ atụlegoro ojiji ka mma. Na mgbakwunye, anyị na-ahụ ụfọdụ ọrụ ọhụụ, dị na akaụntụ efu.
Dịka ọmụmaatụ, Mailrelay nwere ihe editọ ọhụrụ & dobe. N'ihi ya, ọ dị mfe ịmepụta akwụkwọ akụkọ. Na mgbakwunye, n'ime ya anyị na-achọta mgbochi maka netwọkụ mmekọrịta, vidiyo, ederede, otu onyonyo, ogidi, nke na-enyere anyị aka ịme mkpọsa zuru oke. Otu nkọwa dị mkpa bụ na ugbu a anyị nwere ike ịmekọrịta mkpọsa ahụ, inwe ike ịhọrọ n'etiti nhọrọ dị iche iche. Ewezuga otu dị iche iche n'ụzọ ọdịnala, anyị nwekwara ngalaba ọhụụ ọhụrụ, iji mee ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mkpọsa a.
Mgbe anyị mepụtara mkpọsa, ọnụ ọgụgụ dị mkpa. Ọ bụ mpaghara ọzọ nke Mailrelay dịwanye mma. Ha na-enye anyị ozi ndị ọzọ, na mgbakwunye na ịme ya n'oge, nke ga-eme ka anyị nwee ozi niile dị mkpa gbasara mkpọsa. Kedu ndị debanyere aha meghere ozi, mgbe, ebee, onye pịa na njikọ ndị ahụ. Ozi niile iji tụọ ihe ịga nke ọma nke mkpọsa n'ụzọ dị mfe. Enweta ihe omuma bu ihe ozo di nkpa.
Niile na atụmatụ na otu free akaụntụ
Mgbe anyị kwesiri iji ụdị ọrụ a na ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ otu n'ime ndị ọzọ, ihe dị mma bụ na anyị ga-akwụ ụgwọ iji jiri ya. Ọ bụghị ikpe nke Mairelay, anyị nwere ike jiri oge niile na akaụntụ efu, na mgbakwunye na ịnwe n'efu, na-enweghị obere mbipụta.
Niile atụmatụ ndị anyị kpọtụrụ aha n'elu dị na akaụntụ gị n'efu. Anyị nwere ike iji ha mee ihe oge niile, na mgbakwunye na ịnwe nkwado sitere n'aka ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụrụ na ihe emee ma ọ bụ anyị nwere obi abụọ banyere ọrụ nke ọrụ ndị a. Enweghi oke oke na mgbasa ozi ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ anyị nwere ike izipu ihe karịrị otu ụbọchị kwa na-enweghị nsogbu a.
N'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya na Mailrelay bụ nhọrọ ndị ama ama n’etiti ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ngwá ọrụ a na ihe ọ bụla ọ ga-enye na weebụsaịtị ya, ị ga-enwe ike ịmatakwu banyere ngwa ọrụ a, ọrụ ya na otu esi ejide ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Mailrelay: Ngwaọrụ iji mepụta mkpọsa email gị